Senterka Daarusalaam Iyo Deeq Raashin Ah Oo La Gaadhsiiyay - Cakaara News
Senterka Daarusalaam Iyo Deeq Raashin Ah Oo La Gaadhsiiyay
Daarusalaam(cakaaranews)Talaado 25ka April 2017. Wafti uu horkacayo wasiir-kuxigeenka xafiiska waxbarashada DDSI mudane maxamuud Axmed Nuur (Heeryo) ayaa Deeq raashin ah oo isugujirta Bariis, Qamandi, Boorash iyo waliba bustaal u qaybiyay bulshad kudhaqan centerka daarusalaam ee hoosyimaada degmada garbo ee gobolka nogob.
Hadaba, wasiir kuxigeenka xafiiska waxbarashada DDSI mudane Maxamuud Axmed Nuur (Heeryo) oo u waramay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in bulshada kudhaqan senterka daarausalaam ee ay saamaysay isbadalka cimilada aduunku ee roob yaraanta keenay ay maanta gaadhsiiyeen raashin isugu jira bariis, qamandi boorash iyo waliba bustayaal. Wuxuuna wasiirkuxigeenku intaa kudaray in deeqdan ay maanta gaadhsiiyeen ay kamidtahay dadaalada ay xukuumada DDSI kula tacaalayso bulshada xoolodhaqatada ah ee ay saamaysay abaartu.
Sidookale, Gudoomiyaha Gobolka Nogob mudane Axmed Xaaji Aadan oo isna goobjoog ahaa ayaa sheegay in sifiican oo wadaniyad leh loo soo gaadhsiiyay deeq raashin ah oo kaladuwan iyo waiba bustayaal. Wuxuuna mahad celin u soojeediyay dhamaan xuuumada DDSI ee marwalba bulshadeeda lagarabtaagan taageeraha aan kalago’a lahayn.
Ugudanbayna bulshadii lagaadhsiiyay deeqdan raashinka ah ayaa bogaadiyay oo mahad celin iyo waliba Duco balaadhan u soojeediyay xukuumada islamarkaana sheegay in deeqdani aytahay mid ay aad ugu baahnaayee.